गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र खानेपानी मन्त्री बिना मगरको ‘असली परीक्षण’, पर्लान् त ठेकेदार कारबाहीमा ? – Medianp
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र खानेपानी मन्त्री बिना मगरको ‘असली परीक्षण’, पर्लान् त ठेकेदार कारबाहीमा ?
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २४, २०७५१३:१३0
काठमाडौं, २४ जेठ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री होइन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल चर्चामा छन् । गृहमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र यातायात मन्त्रालय पर्दैन । गृह मन्त्रालय मातहतमा रहेको नेपाल प्रहरी यतिखेर निकै विवादमा छ । जसको प्रमुख छन् गृहमन्त्री थापा ।
नेपालमा हुने सुन तस्करीमा नेपाल प्रहरीकै मिलेमतो रहने गरेको अब पुष्टि भइसकेको छ । तर, गृहमन्त्री थापा सुन तस्करका मुख्य व्यक्तिसामु पुग्न सकेका छैनन् । यदि ३८ क्विन्टल तथा साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम हत्याका अभियुक्तलाई कारबाही गर्न सकेनन् भने गृहमन्त्री थापाको तेजोबध हुने निश्चित छ । जबकि अहिलेसम्म प्रहरी सुन तस्करीका असली मालिकसामु पुगेकै छैन ।
अर्कै मन्त्रीको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेका गृहमन्त्री थापा अहिले ठेकेदार कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने विषयमा चर्चित छन् । उनले सडक र पुल निर्माणको जिम्मा लिएर समयमै पूरा नगर्नेमाथि कारबाही गर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यो काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयको भए पनि गृहमन्त्री थापा आफैं अघि बढेका छन् । तर, उनको अगाडि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारी र पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक सांसद हरिनारायण रौनियार बाधक बनेका छन् । यदि यी दुईमाथि कारबाही गर्न थापालाई सजिलो छैन ।
उता, प्रचण्डकी बुहारी बिना मगर पनि परीक्षणमा छिन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्थल पुगेर खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्र मगरले दसैंअघि नै काठमाडौंवासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने घोषणा गरेकी थिइन् । तर, विगत डेढ महिनादेखि आयोजनाको काम ठप्प छ । इटालियन ठेकेदार कम्पनीले डेढ अर्बभन्दा बढी क्षतिपूर्ति रकम माग गर्दै काम रोकेपछि आयोजना अबको पाँच महिनामै पूरा हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । किनकि अझै १० प्रतिशत काम बाँकी छ । त्यो भनेको पाइप बिछ्याउने कार्य हो । मेलम्ची आयोजना समयमै पूरा नगर्ने षड्यन्त्रले पछिल्लो गतिविधि भएको उनको दाबी छ । आफूलाई असफल पार्न मेलम्ची आयोजना समयमै पूरा नगर्न खेल खेलिरहेको मन्त्री मगरको भनाइ छ ।
जुलिया रोबर्ट्स बन्ने सोख बोकेकी प्रियंकाले बिगारिन ओठ र नाक
अशोक दर्जीको पहिलो स्टेज शो भव्य, मन्त्रीले गरे उनको बयान
यी सुन्दरी महिला ट्रक ड्राइभर बनेपछि विश्वभर चर्चा चुलिदै, तर यस्तो दर्दनाक छ उनको कथा..!